Porn and Perception: သင်၏ Limbic Brain သည်သင်၏အမြင်ကိုဖျက်စီးနေသလား။ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
porn နှင့်အမြင်: သင့် Vision ၏ယိုယွင်းနေသင့် Limbic ဦးနှောက်လား? (2010)
ငါပြန်လာတဲ့အခါလူမှုရေးအခြေအနေတွေမှာအဆင်မပြေဘူး။ ဟာသပဲ ပြန်လည်ကျင့်သုံးပြီးချက်ချင်းစကားပြောတဲ့အခါငါကဘာလို့ဒီလူနဲ့စကားပြောရတာလဲ၊ သူတို့ကငါ့ကိုဘာကြောင့်စကားပြောချင်ကြတာလဲ။ ဒီစကားဝိုင်းကနေငါ့ရဲ့ငွေကြေး၊ ဒါမှမဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာအမြတ်ကဘာလဲ။ ” ငါပြန်သွားတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ့်အကြောင်းနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေမယ့်သဘောအေးဆေးတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိဖို့လိုတယ်။ LOL ဒါငါ PMO တုန်းက ဦး နှောက်ကငါ့ကိုလုပ်ပေးတာပဲ။ shity shit ပါပဲ
မကြာခဏညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုသည်အသုံးပြုသူများ၏သဘောထားကိုမမျှော်လင့်ဘဲပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသလား။ တစ်လမှနှစ်လအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများရပ်တန့်သွားသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖိုရမ်တွင်တင်ထားသောသုံးစွဲသူများသည်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၊ အကောင်းမြင်ခြင်းနှင့်သူတို့၏ဘ ၀ အပေါ်မကျေနပ်မှုလျော့နည်းသွားကြောင်းဖော်ပြသည်။ သူတို့ကအမြိုးသမီးမြားနှငျ့ဆက်ဆံရေးကွဲပြားခြားနားကြည့်ပါ။ ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများကိုတိုင်းတာရန်ခက်ခဲသော်လည်းယေဘူယျအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းထက်ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်သည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပြောခဲ့သည်
ရှစ်သို့မဟုတ်ကိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျွန်မနေ့စဉ် porn စောင့်ကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ယနေ့ငါ 21 ဖြစ်၏။ ငါအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နေ့ masturbated, ဒါပေမယ့်မကြာခဏ6ကြိမ်အထိ။ ငါအမှန်တကယ်ငါ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ထင်ပေမယ့်တစ်နေ့မှာငါအုပ်စုခွဲကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏မျိုးရှိခဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ horny ငါခြေနှစ်ခုနှင့်အတူယောနိအဖြစ်, စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုအရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးကိုမြင်တော်မူ၏။ ငါသည်ဤကယ့်ကိုစော်ကားသောအသံကိုငါသိ၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အားလုံးသူငယ်ချင်းတွေအတူတူပင်လမ်းထင်, ဒါကြောင့်ငါကအဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှုများတယ်ဘယ်တော့မှမ။
တစ် ဦး ကအမြင်ပြောင်းကုန်ပြီသိမ်မွေ့သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ရောဂါရှိသူကိုရံဖန်ရံခါသိသာသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နားလည်ပြီးမှသာလျှင်၎င်းသည်ထင်ရှားနိုင်သည်။ (ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းကုန်ပြီ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်မြင်သာထင်သာလက္ခဏာ ပို. ပို. လေးလံသော porn အသုံးပြုသူများသည် အခမဲ့အင်တာနက်ကဗီဒီယိုတွေကိုတချို့ငါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်ကတည်းကအစီရင်ခံစာ။ )
ယနေ့သုံးစွဲသူများ၏အလားအလာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကဖြစ်နိုင်သည် နေစဉ်အတွင်း အသုံး သူတို့ရဲ့အမြင်များကိုလည်းလစုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူ porn အသုံးပြုမှုမှတ်တိုင်များပြီးနောက် အပေါ်မှီခိုထက်ပိုထုတ်ဖေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရိုက်ချက် ဥပမာ - လက်ရှိအသုံးပြုသူများကိုညစ်ညမ်းဆိုးကျိုးများအကြောင်းမေးခြင်းသာဖြစ်သည်။
ဤတွင်ရှည်အချိန် porn အသုံးပြုသူများ၏ရေးသားချက်များကနေမကြာသေးခင်ကကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်လကိုပြီးနောက်သူ masturbating မပါဘဲသစ်အချို့ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများ stream နှင့်သူ၏တွေ့ကြုံမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
တတိယနှင့်စတုတ္ထဗီဒီယိုများဒုတိယတူသောအများကြီးခဲ့ကြသည်: ညံ့ဖျင်းသေနတ်နှင့်သင်တန်းသားများကိုမသူတို့လုပ်နေတာခဲ့ကြသည်ဘာစေ့စပ်ခံရဖို့ထင်ရှား။ , စတုတ္ထအများဆုံးကျိန်းသေအတိတ်၌ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အနီးကပ်-up, ရုပ်ရှင်ခဲ့ပေမယ့်တချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ပိုပြီးစားဖိုမှူးအသားစာရွက်အချို့ကြင်နာပြင်ဆင်နေခဲ့သည့်အတွက်ချက်ပြုတ်ပြပွဲကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်ယနေ့ထင်ရှား။ ,
ပဉ်စမကဗီဒီယိုငါက၎င်း၏တခုလုံးခုနစ်မိနစ်အတွင်းစောင့်ကြည့်သောတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးအပျော်တမ်းပဲကြိုတင်လိင်မှ (ငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့သူ့ဇနီးမရမျှော်လင့်ပါတယ်) သူ့ရည်းစားရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်အဆိုပါရိုက်ကူးရေးနှင့် ပတ်သက်. ဆန္ဒပြကင်မရာကို turn off ရန်နှင့်သူမ၏မအင်္ဂါတွင်ချဲ့မသူ့ကိုတောငျးဆိုပေမယ့်သူကနှစ်ဦးစလုံးလုပ်နေတာအပေါ်အခိုင်အမာခဲ့သည်။ သူတို့ fucked စဉ်ထို့နောက်သူ (သူမ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုဆန့်ကျင်) ရိုက်ကူးမယ့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကင်မရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်။
သူတို့ရဲ့အပြန်အလှန်၏ non-ကြည်ကြည်ရှုထောင့်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းငါ့ကိုစိတ်ပူပန်ခြင်း, ဒါပေမယ့်ငါမပြုမီပစ္စည်း၏ဒီမျိုးကိုကြည့်ရှုလုံးဝကြောင်းလျစ်လျူရှုခဲ့ကြကြောင်းဝန်ခံရပါမည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးမှာနှစ်ဦးစလုံးကခံစားရမည်ထင်ရှား။ , ထို့နောက်ကောင်လေးစအိုလိင်ဆက်ဆံအစပျိုးပေမယ့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမသည်အတော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ကောင်လေးသူမကိုတောင်းပန်စကားကိုနားမထောင်ခဲ့သလဲ, သူမ၏ဆန္ဒပြပွဲများကိုတုံ့ပြန်၌သူ၏အရှိန်အဟုန် / ချောဆီအရည်ကြည်ကိုပြောင်းလဲပေါ်လာခဲ့ပါဘူး။ မကြာခင်မှာပဲထိုမိန်းမသည်ဘာမှပြောနေပေမယ့်ရံဖန်ရံခါပုံခံနိုင်ရည်ရှိဖို့အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်, (နာကျင်မှုအတွက်ကြောင့်ရှင်းလင်းစွာခဲ့) gasping မဟုတ်, မိမိကိုယ်ကိုအတွင်းအပြင်ဆုတ်ခွာတို့အားထင်ရှားလေ၏။ ကောင်လေးနောက်ဆုံးတော့ပြီးဆုံးသည့်အခါထိုမိန်းမသည်ငါတတ်နိုင်သမျှထင်နှင့်တိတ်တဆိတ် whimpering စတင်ခဲ့ပြီးထက်ပိုကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အတူညညျးတှား။ ကျွန်မစအို-နာကျင်မှု fetish ဗီဒီယိုများရှိပါတယ်အပြည့်အဝသတိပြုဖြစ်ကြောင်းကို, တို (ဝမ်းနည်းစရာ) အများကြီးကိုတှေ့မွငျဒါကြောင့်ငါသည်ဤစစ်မှန်သောနာကျင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်ယုံကြည်မိပါတယ်။ ငါ masturbating ခဲ့, ငါသည်လည်းငါရွေးချယ်ဖြစ်ကောင်းပင် internalizing သို့မဟုတ်သူတို့ကိုပုံမှန်အဆိုပါစိတ်ပျက်စရာကြည်ကြည်ပြဿနာများအားလုံးလစ်လျူရှုခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့သိလျှင်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုအော်ဂဇင်ဖူးမယ်လို့သိရကြ၏။
သူ browser ကိုပိတ်သူ၏အကြံအစည်ဖမ်းမိ:
ငါအခုကြည့်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတော်တော်များများဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းဘူး၊ ကျွန်တော့်သဘောထားပြောင်းလဲနေပါတယ် ယခင်ကကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်အင်္ဂါလိင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သောဆက်ဆံမှုများနှင့်စအိုအူကိုက်များနှင့်အဆက်ဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်အတိတ်ကာလကသူမသည် porn ကိုအတုခိုးခြင်းမပြုလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဇနီးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မကျေနပ်မှုမကြာခဏခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူမကိုကျွန်ုပ်ဆက်ဆံပုံကိုနောင်တရနေပြီးသူမကိုကျွန်ုပ်အားခြွင်းချက်မရှိချစ်နေဆဲဖြစ်သည်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကောင်းပြီ, ခြွင်းချက်မရှိမဟုတ်ဘဲမဟုတ်ဘဲကိုယ်ကျိုးမဖက်။
မကြာသေးခင်ကအထိကျွန်မအလုံအလောက်လိင် get ဘယ်တော့မှနိုင်ကြောင်းယုံကြည်သည်, ငါသည်အခြားနေ့ကလိင်တစ်ကြိမ်ထက်မပိုကြိုက်နှစ်သက်သည်နှင့်တိုင်း orifice ၏ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိထိုးဖောက်မှုလိုက်လျောညီထွေမရှိသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုလက်ထပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကံခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါမူကားငါအောင်မြင်စွာစစ်မှန်စွာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများပေါ်တွင်သူမ၏လိင်အဘို့အကြှနျုပျ၏ဇနီးတန်ဖိုးထားဖို့ကြိုးစားနေနှင့်တက်ကြွစွာတဖြည်းဖြည်းပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းငါ၏အကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နတောဖွစျတယျသောစိတ်ကူးယဉ် / obsessive ရမ္မက်နှိပ်ကွပ်သာအနည်းဆုံး masturbating, ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲ 31 ရက်ပေါင်းမှတဆင့်တယ် ။
ကျွန်ုပ်၏ 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြမှု' ကိုဤစမ်းသပ်မှုလျှော့ချပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုသည်လိင်မှုကိစ္စကိုအလေးထားသည်၊ သို့မဟုတ် ပို၍ တိကျစွာ၊ ကျွန်ုပ်သည် 'လွတ်လပ်မှု' ရှိခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်မှုကိစ္စကိုကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်ပါ ၀ င်သူအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မှာထင်ရှားလာသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေး၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်အမျိုးအစားတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏အခြေခံသဘောထားကိုထိခိုက်စေခဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံများစွာကိုလည်းကန့်သတ်ထားသည်။
လိင်မှုကိစ္စမကျေနပ်မှုအဖြစ်လိင်စိတ်မကျေနပ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ မြှုပ်နှံခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်မြှုပ်နှံထားသောအချိန်ပမာဏကိုမတွက်ရသေးသော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတင်းအဓမ္မပြုကျင့်မှုများမှကင်းလွတ်ခွင့်မရသေးသော်လည်း ၁၆ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ သည်အလွန်ပင်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအတွေ့အကြုံများကိုပေးစွမ်းနိုင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများမပါ ၀ င်နိုင်သေးပါ။ မဖြစ်မနေမှလွတ်လပ်ခွင့်ဤရူပါရုံကိုလုံးဝဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစိတ်ကူးယဉ်နှင့်ငါ့လိင်ဘဝနှင့်အတူအခြေခံမကျေနပ်မှုကိုသူတို့ပုံမှန်အတိုင်းအင်အားစုမဆိုနှင့်အတူပြန်လာခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ကျွန်တော့်ဇနီး၏အကြှနျုပျ၏အမြင်လည်းပြောင်းလဲနေပါတယ်။ သူမသည် ပို. ပို. ဆွဲဆောင်မှုကြည့်ရှုသည်။ ဒါကတစ်ခုသာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်!
ဖတ် အတိတ်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောပိုပြီးအမြင်ဆိုင်း။ Lance Tracy's ကိုလည်းကြည့်ပါ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Entertainment က: Disrobing အနေနဲ့ American Idol, တူညီသောဖြစ်ရပ်ဆန်းထင်ရှားကြောင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအကြောင်းလိမ္မာပါးနပ်, ရယ်စရာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။
ဘယ်လို porn ပြောင်းလဲမှုအမြင်ကြည့်ရှုနိုင်သလဲ ဖြစ်နိုင်အတွက်ဆုလာဘ် circuitry desensitizing အားဖြင့် limbic ဦးနှောက်။ ဦး နှောက်၏ဤစရိုက်နယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာကိုမည်သို့မြင်သည်ကိုအရောင်ခြယ်သည်။ မျှမျှတတရှိရင်အရာရာကိုပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အကောင်းမြင်တတ်လာတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ချိန်ခွင်လျှာထဲက ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ကြုံမကြာခဏပုံပျက်နေကြသည်။
ဆေးဝါးများ, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် Over-ဆွကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံ, ဦးစားပေးများနှင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများပြောင်းလဲ-အားလုံးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတရားမရှိဘဲ။ သိပ်ဆွ၏ဖြစ်ရပ်မှာပြောင်းကုန်ပြီ superstimuli overvaluing ၏ညှနျကွား၌တည်ရှိ၏။ ဇီဝဗေဒပညာရှင်ရောဘတ် Sapolsky ရှင်းပြအဖြစ် အဘယ့်ကြောင့် Zebra သည်အစာအိမ်နာမဖြစ်နိုင်သနည်း:
သဘာဝအားဖြင့်ခိုင်မာသည့်ဒြပ်အတွေ့အကြုံနှင့်အာရုံခံစားမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုပေါက်ကွဲခြင်းများသည်သဘာဝအားဖြင့်ခိုင်မာသောလေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီနှစ်ခုအကျိုးဆက်များရှိပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောင်း ဦး ရာသီ၌အရွက်များကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ရှည်လျားသော၊ ခက်ခဲပြီးထိုက်တန်သောလုပ်ငန်းပြီးမြောက်လာမည့်အကျိုးကိုဖြစ်စေသောကတိတော်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောတီးတိုးတီးတိုးများကိုသတိမထားမိတော့ပါ။ အခြားအကျိုးဆက်တစ်ခုမှာခဏကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာများဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ …ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးကငါတို့ဟာပိုပြီးဆာလောင်မွတ်သိပ်လာတယ်။
Over-ဆွနာတာရှည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်လမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကျေနပ်ဖို့ပျက်ကွက်; ဒါဟာနီးပါး insatiable ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသူ့ကိုယ်သူအကြောင်းကိုအလိုအလျှောက်အံ့သြတွေ့ပါစေခြင်းငှါ တိုင်း မိန်းမ, "မ သူမ ထိတွေ့ဆက်ဆံပါ။ ?” ထို့အပြင်သူ၏ virtual reality နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်များအကြားမတူကွဲပြားမှုများကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောမည်သည့်မကျေနပ်မှုကသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် / သမဂ္ဂအပေါ်သံသယဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ သူကသူ့ဆက်ဆံရေးကိုအာရုံစိုက်မယ် မ ကမ်းလှမ်းမှုမဟုတ်, အဘယျသို့ပေါ်မှာ မ။ မဟုတ်သလိုမကျေနပ်မှုသေချာပေါက်ရှိကိုရပ်တန့်ပါဘူး။ လူသားတွေဟာအဖြစ်ကောင်းစွာအလိုအလျှောက်ဘဝ၏အခြားရှုထောင့်ပေါ်ကိုထိုကဲ့သို့သောခံစားချက်တွေကိုပရောဂျက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဖြစ်တည်မှု angst မည်သူမဆို?
၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာက neurochemical dysregulation ကြောင့်မွေးဖွားလာတဲ့ပုံပျက်အမြင်ကလူတစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်သူ့ကိုတကယ်မောင်းနှင်တာလဲ၊ သူ၏ခြေလက် ဦး နှောက်သည်၎င်းကိုအခိုင်အမာယုံကြည်စိတ်ချစေသည် သာ ရွေးချယ်မှုသည်သူ၏မူးယစ်ဆေးသည်သူ၏ကောင်းသောခံစားချက်တွေကိုပြန်ပေးမည်။
ပုံမှန် overimimulation ပြီးနောက်ပုံမှန်အမြင်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ခက်ခဲသောတစ်လနှစ်လခန့်ကြာနိုင်သည်။ သို့သော်ကြမ်းတမ်းသောခံစားချက်များသည်လွယ်ကူလာသည်နှင့်အမျှဘဝကဏ္ aspect တိုင်း၌ကျေနပ်မှုရရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
ငါတို့လိင်ကစားခြင်းတွင်ပါဝင်စဉ်အချိန်၌ငါသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုသည့်နှစ်ပတ်တာကာလကိုဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းသူမအဆင်ပြေသော soft-core ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရုတ်တရက်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ဒါကအရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ သူမငါ့ကိုအကြောင်းပြချက်မပေးခင်ငါပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မုန်းတီးခဲ့တယ်။ နှစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်းအော်ဂဇင်ကိုကျွန်တော်မကြုံဖူးဘူး၊
ယခုကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ထားသောအသိပညာနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်၏ဘဝအများစုအတွက်ဤမငြိမ်မသက်ပြုမူသောအပြုအမူများကိုနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးများကဖွင့်လိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့မနက်မှာအိပ်မောကျပြီးအိပ်ယာထပြီးအိပ်ရာကထလိုက်တယ်။
အဆိုပါအိပ်မက်မဟုတ်ဘဲထူးထူးဆန်းဆန်းခဲ့ပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အလွန်ရှည်လျားသောကာလ၌ငါကငါ့ကိုမပြောပြရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်အရာကိုသိထင်ပါတယ်။ က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ကျွန်မအခြို့သောအဆင်းလှသောမိန်းမနှင့်အတူရှိ၏။ ဒါဟာသူမထိတွေ့နေတဲ့အဝတ်အချည်းစည်းရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူစာရွက်အချို့ကိုမျိုးအတွက်လဲလျောင်းခံခဲ့ရသည်အလွန်ခေါ်ဆောင်သွား scenario- ကြီးနှင့်ငါတကယ် horny ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မသူ့ကိုမှတက် သွား. , ညင်ညင်သာသာသူမ၏ရင်သားပေါ်တွင်နို့စို့စတင်ခဲ့ပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီငါစာရွက်အောက်မှာသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာငါ့လက်ကိုတင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သကဲ့သို့ငါခံစားခဲ့ရသမျှသောသတ္တုထမ်းဘိုးနှင့်ဝါယာကြိုးတစည်းခဲ့ကြသည်။ ညာဘက်အကြှနျုပျ၏အလွန်မျက်မှောက်၌ဖြစ်ခြင်းဤလှပသောလူနေမှု, အသက်ရှူစက်အချို့ကိုကြင်နာလျှော့ချခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသောဘဝများစွာအတွက်အမျိုးသမီးများနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဥပစာစကားသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းမှပျော်ရွှင်မှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရရန်ရှာဖွေခြင်းသည်အမှန်တကယ်တွင်လှပသော၊ ဒါဟာဒီစက်ဖြစ်လာပြီးစက်ကမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူး။
ငါ porn ငါ့ကိုဆုံးမသွန်သင်ခံစားရကြောင်းအဆိုပါနောက်ဆုံးအရာမဆိုသဘာဝကျပါတယ်လျှင်အရာခပ်သိမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတကယ်ငါ့ဦးခေါင်းသည်ခုနှစ်, ချစ်စရာပူ, sexy နှင့်အခြားသောအမှုအရာထရော porn ခံစားရတယ်။ တကယ်တော့သူတို့ကအစစ်အမှန်ဘဝတကယ်လိုက်တယ်ကြောင်းကိုဒါလဲလှယ်ပုံရသည်။ ဒါဟာနီးပါးတစ်စုံတစ်ဦးကအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါ၏ဦးခေါင်း၌ပါးလွှာကြီးငါ့ကိုသူတို့ကိုဆွဲဆောင်မှုစဉ်းစားရန်အဘို့အလုံလောက်အောင်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုနဲ့တူခံစားရ၏။ သူများသည်စာသားဆွဲဆောင်မှုအဆုံးအဖြတ်ကိုငါရှိသည်သာစံခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံး OCD ကြောက်စိတ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ pedophile ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုစဉ်းစားပါ။ ငါမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အသေးအဖွဲအမျိုးသမီးများပါ ၀ င်ခဲ့တဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုအနည်းငယ်ကိုမှတ်မိနေပြီး၊ စစ်ဆေးရန်မလွယ်ကူပါ။ (စစ်ဆေးခြင်းမပြုခြင်းသည်စိုးရိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ သို့သော်စစ်ဆေးခြင်းသည်အခြားပြproblemsနာများသို့သာ ဦး တည်သွားသည်ဖြစ်သောကြောင့်) သို့သော်ထိုအမျိုးသမီးများသည်သူတို့အမှန်တကယ်ထက်ငယ်သည်ကိုကြည့်ရှုရမည်ဟုခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်၎င်းကို“ သင်ငယ်ရွယ်သောဆယ်ကျော်သက်များ (သို့) ကလေးငယ်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ရန်” အတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်များသည်အပြည့်အဝရင့်ကျက်လာသည် (ကျွန်ုပ်သိသည်) သို့သော်၎င်းတို့သည်အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်သောအခါသူတို့ကိုဆွဲဆောင်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်သင်အမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေခြင်း၏နှစ်သက်မှုအတွက်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ရှုထောင့်များကိုလျစ်လျူရှုခွင့်ပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသို့မဟုတ်အချို့သောရှုထောင့်များကိုဆွဲဆောင်မှုမတွေ့သော်လည်းသူတို့၏အမှန်တကယ်တန်သောခန္ဓာကိုယ်သည်လုံလောက်သည်။ ငါအလေးပေးသောဗီဒီယိုများကိုငါအာရုံစိုက်နိုင်သည်။ ငါတကယ်လိုချင်သောကလစ်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ငါ frankenstein ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုနဂါးဖန်တီးငါနဲ့တူနီးပါးခံစားရတယ်။ ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျကြည့်ရှုသည့်အခါကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုပုံဖော်ခြင်းသည်ဆွဲဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ အခြေခံအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်အမြင်အာရုံပြတ်တောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းတွင်သင်အကြိုက်ဆုံး wham bams များကိုသာအာရုံစိုက်နိုင်သည့်အပြင်အထုပ်တစ်ခုလုံးကိုအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲသဘာဝ wham bams အားလုံးရှိသည်။
ငါဘာကြောင့် porn ကိုနှစ်သက်ရတာလဲဆိုတာကိုစပြီးစာရင်းပြုစုတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကသီချင်းတွေကိုစစစလုပ်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်၊ ဒါကဒီ subreddit အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့မေးခွန်းကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလှန်လိုက်ပြီးငါဘာကြောင့်ငါဖော်ပြတယ် နျး porn ။
ဒါဟာအထိအသက်ရှင်ဖို့တစ်ခုလက်တွေ့စံဖန်တီးပေးပါတယ်။ ငါကဒီမှာနှစ်ခုလုံးလိင်များအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ပြောနေတာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံသောဆွဲဆောင်မှုရှိသူများကိုကြည့်ချင်သည်။ porn သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလူများကိုအလုပ်ခန့်သည်။ ဒါကငါ့အတွက်ပြproblemsနာတွေဖန်တီးပေးတယ်။ ငါဟာစံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ယောက်ျားတွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ငါတိုင်းတာတာမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်။
ဒါဟာအချိန်တွေအများကြီးဖြုန်းတီးနေတယ်။ ငါလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်း၊ နေရာတိုင်းမှာ porn လိုချင်သလောက်ကိုရှာနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်အဆုံးမဲ့အာရုံဖြည့်ဆည်းပေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အစားငါကလိင်ဆက်ဆံတာထက်လူတွေကိုကြည့်တာကိုကြည့်နေတယ်။
ဒါဟာလူ့ဆက်သွယ်မှုအောင်မှအကြှနျုပျကိုကာကွယ်ပေးသည်။ porn ကိုစောင့်ကြည့်မယ့်အစားလိင်၏ search အတွက်ထွက်နှင့်ငါ့ဂိမ်းအလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်, ငါစိတ်ခံစားမှုတန့်နှင့်နုဖြစ်လာကြပါပြီခံစားရတယ်။
ဒါဟာသာမန်တစ်ဦးတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အပေါ်ကအကြောင်းပြချက်သုံးခုကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုမခံစားရ၊ ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီးအိပ်ရာသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အသုံးချနိုင်သည့်အချိန်ကိုစားသည်။ ငါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှု။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုသည်ကျွန်ုပ်လက်ချောင်းထိပ်ဖျားတွင် ၂၄/၇ ဖြစ်သောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်အာရုံစိုက်ရန်အကြောင်းပြချက်ပင်မရှိဟုကျွန်ုပ်ခံစားရသည့်အချိန်များရှိသည်။
ဒီတော့မင်းရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်၊ ငါ porn ကိုမုန်းတဲ့အရာကငါကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပဲ။ ငါကတခြားလူတွေမှာရှိနေတာ၊ ငါလုပ်နေတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုအမြဲတမ်းရပ်တန့်နေတာထက်အဲဒါကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းကပိုပြီးပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
နောက်တစ်ညမှာအထက်တန်းကျောင်းကသူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါဒီနွေ ဦး မှာကောလိပ်တက်ခဲ့တယ်။ ငါသောက်စရာများနှင့် shenanigans နှင့်၎င်းတို့၏ frat အိမ်သို့နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာ၌ငါမမြင်စဖူးသောလူတို့နှင့်အတူမီရန်အခွင့်အလမ်းအဘို့အ ဦး တည်။ (ချည်ရန် LINK)
နောက်ခံအကြောင်းအရာအရငါဟာဒီနွေရာသီမှာငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်အရွယ်နဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြသင့်တယ်။ ငါ LOT လုပ်နေတယ် (dem ကျောင်းသားချေးငွေတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့မပေးဆပ်ဘူး)၊ ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနည်းငယ်ကငါ့ထက်သိသိသာသာကြီးတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီညဟာငါ NoFap ခရီးစဉ်ကိုမေလကတည်းကစတင်ခဲ့တာပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့။
လှည့်လည်လမ်းလျှောက်ပြီးလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်း၊ အချို့သောလူတို့၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားများ၌ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငါတွေ့မြင်နိုင်ပြီးသူတို့၏ခေါင်းများသည်မြှောက်ထားသည့်ပခုံးများကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ သူတို့ရဲ့အသံမြည်သံတွေကြားရတယ်။ ငါသူတို့အတွင်းပိုင်းမျက်လုံးချင်းစောင့်ရှောက်ရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုပိတ်ပစ်အချို့အတွင်းကာကွယ်ရေးယန္တရားခံစားရတယ်။
ငါအစွမ်းထက်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုရခဲ့တယ်။ မင်းကသင်ကစွဲလမ်းနေရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိရှိရှိရှောင်ရှားရန်သိမ်မွေ့သောနည်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကို၎င်းသည်၎င်း၏အနှစ်သာရကိုထိုးသွင်းသည်။
Fapstronauts ကသူတို့အမျိုးသမီးတွေဆီသူတို့ချဉ်းကပ်လာတာကိုသူတို့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့သတင်းပို့တာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါငါအခုရပြီ။ သူတို့အမှီသဟဲပြုခြင်းအပေါ်မှီခိုနေရခြင်းကိုကြေးနန်းရုပ်သိမ်းခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
ကျွန်တော့်အလေ့အထဟောင်းကိုဘယ်တော့မှပြန်လှည့်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှန်တရားကိုသိပြီ။ သင်၏မုန်းတီးမှုများကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သောဖိုင်တွဲများထဲမှဖိုင်တွဲများထဲတွင်သင်အလွယ်တကူဖုံးကွယ်နိုင်သည်။ သငျသညျလျှို့ဝှက်၏အစွမ်းကုန်အတွက် fap နိုင်ပါတယ်; သင်ထွက်သွားပြီးသင်၏လူသားချင်းများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါသင်တို့၏ဒစ်ကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်မြင်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်ငါက PMO မရှိဘဲရက်ပေါင်း 32 မှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုအခါငါနောက်ဆုံးတော့မနေ့ကမတရားသောအတွက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ ငါကငါသင်ယူအရေးပါသောအရာကြီးထင်နေသောကြောင့်ငါသည်ယနေ့ခဲ့အနေနဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှချင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ငါမနေ့ညကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီကငါမြင်နေရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့တစ်လခန့်သာချိန်းတွေ့ခဲ့ကြရသည် (ကျွန်ုပ်၏ fapping မတိုက်ဆိုင်) အများအားဖြင့်သူနှင့်ကျွန်တော်ရှိစဉ်အချိန်ကောင်းသည်၊ သူမသည်သူမအားအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအလွန် sexy ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်တို့သည်တော်တော်များများကိုလှည့်စားခဲ့ကြပြီးဤကာလများအတွင်းကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအလှည့်အပြောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ကောင်းပြီဒီနေ့အရမ်းကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အိမ်ပြန်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ သူမနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအရူးလုပ်နေသလိုမျိုးမခံစားရဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်ကြည့်ခဲ့သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်အတွက် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းကြောင်း၊ အမှန်တကယ်ပင် ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းသည့်လူတစ်ယောက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာသည်။
ငါပြန်မလာဘူးလို့ပြောချင်ပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့အဲဒီကနေသင်ယူခွင့်ရလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်။ PMO သည်သင်အမျိုးသမီးများကိုကြည့်သည့်ရှုထောင့်ကိုအရှိန်မြှင့်ပြီး၎င်းကိုလုံးလုံးရှုပ်ထွေးစေသည်။ ငါယောက်ျားတွေသော်လည်းငါပြန်ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ့! ငါ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကို Screw, ငါကရက်ပေါင်း 90 မှလုပ်နေပါတယ်။
တည်းဖြတ်ပါ - မှတ်ချက်များကိုဖတ်ပြီးနောက်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်ထည့်လိုက်သည်။ ငါ YMMV ဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်ပြောချင်တယ်။ ဒါကငါဟာဂရုမစိုက်တဲ့အချိန်ကသူမညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညစ်ညစ်ပတ်နဲ့ခံစားနေရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ ငါမနေ့ညကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းနှင့်သူမကိုလူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဂရုမစိုက်ခြင်းစပ်ကြားဆက်နွယ်မှုကိုမမြင်နိုင်ဘူး။
တစ်ဦးက 65 နှစ်အရွယ် ကောင်လေးရေးသားခဲ့သည်:
ငါ့အဘို့ပြန်လည်ချိန်ခွင်လျှာဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်အစစ်အမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်း ၇၀ အတွင်းမှာ၊ ငါ့ ဦး နှောက်ဟာအထူးသဖြင့်လိင်ကိစ္စမှာမှတ်မိနိုင်တဲ့အချိန်ကထက်ကွဲပြားခြားနားတယ်။ ငါ့အတွက်တော့ဒါကသုံးဖက်မြင်လိင်၊ ငါပြန်လည်ချိန်ခွင်ပြီးကတည်းကငါသုံးဖက်မြင်လိင်မကြုံတွေ့ရသေးပေမယ့်အခွင့်အလမ်းအဘို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ဟန်ချက်ညီညီပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း၏အပြုသဘောဆောင်သောရလာဒ်များမှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ယူဆသည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်ဖြစ်သောအရာများကိုသာအာရုံစိုက်သောကြောင့်လူ့ဆက်ဆံရေး (ထပ်မံကျွန်ုပ်အတွက်) တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။2ရှုထောင်လိင် (porn, စိတ်ကူးယဉ်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစသည်တို့ကို) တစ်လမ်းအတွက်ငါ့အဆက်ဆံရေးအားလုံးသို့တိတ်တဆိတ်။ ငါမြင်သောအရာတို့သည်သူတို့အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ငါ့ ဦး နှောက်ကသူတစ်ပါး၏အပြုအမူများကိုမှန်ကန်စွာ၊ မှားယွင်းစွာရှင်းပြပေးခဲ့သည်။ ၂ ဖက်မြင်လိင်သည်ကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သောတီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာတွေကိုကျွန်ုပ်ကြိုမြင်ပြီးထင်မြင်ချက်အရာတွေဖြစ်တဲ့အရာတွေ၊ ပိုပြီးတိကျစွာသူတို့ကိုငါမြင်တဲ့ (သို့) သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကို filter လုပ်စေတယ်။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းထဲမှာတစ်ကိုယ်ရေဘဝတစ်လျှောက်လုံးနေထိုင်ရတာတော်တော်အထီးကျန်ပါပဲ။
ကိုယ့် ၉၁ ရက်ပဲကျန်တော့တယ် ၉၁ ရက်သည် fapping မရှိ၊ porn မပါ။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်မပြည့်စုံသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်နောက်တစ်ခါကြည့်ရှုခြင်း ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကို reset လုပ်သလိုမျိုးမခံစားရဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့ကိုမပတ်သက်ဘူး ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ငါ့ဆက်ဆံရေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကထက်ပိုကောင်းတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်နှစ်ခုလုံးတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ကိုမည်သို့ veiwop လုပ်သည်နှင့်အမျှ 'သာမန်' အမျိုးသမီးများသို့စတင်ပြောင်းလဲလာသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်းသောပြိုကွဲမှုနှင့်လိင်အင်္ဂါဇာတ်မဟုတ်တော့ဘဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်လေးစားမှုခံထိုက်သောအမှန်တကယ်ပြည့်ဝသောလူများဖြစ်လာသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုစုစုပေါင်း douche အိတ်များအဖြစ် ကျော်လွန်၍ တိုးတက်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါကအဓိပ္ပာယ်မဲ့သောကျပန်းလိင်ဆန္ဒကိုကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒကိုတကယ့်အဖော်နှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဆက်ဆံမှုတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်။ ငါတို့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးအဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်တဲ့သူဟာငါတို့အရင်ကရရှိခဲ့တာထက်
အခုဆိုရင်အမျိုးသမီးသူငယ်ချင်းတွေရနိုင်တာကတကယ့်ကိုပျော်စရာကောင်းတယ်။ သူတို့နဲ့အမြဲတမ်းလိင်အကြောင်းမစဉ်းစားတော့ဘူး။ ငါစွဲလမ်းစဉ်ငါကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးတွေကန့်ကွက်ခြင်းမရှိတော့ပါသဘောပေါက်လာတယ်
NoFap စိတ်ကိုပေါ်အလှနျအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့အစဉ်အဆက်-ပစ္စုပ္ပန်စစ်တိုက်သည်။ ငါသည်အခြားမည်သူမဆိုနှင့်အတူရင်းနှီးခဲ့ဘူးသောတဆယ်နှစ်ပါးသောလကြာကာလအတွင်းလူပေါင်းငါနှင့်အတူပါပါဝင်ပတ်သက်ရရန်ကြိုးစားခဲ့ခဲ့သည်။ ငါအရာအားလုံးနဲ့ကျွန်မအပေါ်မျက်နှာပြင်တပ်မက်လိုချင်သောအရာတစုံတခုကိုမွငျလြှငျဖို့အသုံးပြုကြောင့်သူတို့ထဲကအသီးအသီး, ငါ့မျှော်လင့်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ / r / iasip/ သင်၏စံချိန်စံညွှန်းကိုအနည်းငယ်နည်းနည်းလျှော့လိုက်လျှင်သင်ထပ်မံပြင်ဆင်မည်ဟုစာတန်းထိုးပါသည့် Mac ၏ပုံကောင်းတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။
ဒါအမှန်ပဲ၊ အရမ်းကောင်းတယ် ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ကိုဖြတ်ပြီးကတည်းကငါကလူတွေအလွယ်တကူနှိုးဆွနိုင်ပြီးလူတိုင်းကလှတယ်။ လူတိုင်းကိုအပြစ်အနာအဆာတွေရှိနေတယ်၊ ​​ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်၊ တကယ်တော့ဒါဟာငါတို့အားလုံးဘယ်လောက်မစုံလင်ဘူးဆိုတာကိုလှပတဲ့လှလှလေးတွေပါပဲ။
ငါ့ ဦး နှောက်ထဲကငါ့ရဲ့ပုံရိပ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘာဝအလှအပအထိလက်တွေ့မဆန်သောပြည့်တန်ဆာမှပြန်လည်ချိတ်ဆက်နေသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ငါရုတ်တရက်လမ်းပေါ်ရှိကျပန်းမိန်းကလေးများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်သူတို့နှင့်အတူပါဝငျဖို့တွန်းအားပေးငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ 1080p ၌ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့ပ်၌ရှိကောင်းရှိနိုင်မည့်အရာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောကြောင့်ထိုဆန္ဒသည်ကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထူးဆန်း, အသက်ရှင်ခြင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏တိုးမြှင့်တပ်မက်သောစိတ်ကိုလည်းပျမ်းမျှအားအမျိုးသမီးတစ်ဦးလိင်ငါ့ကိုဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်လိုအတူတိုက်ဆိုင်။ NoFap ဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန်လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ထဲသို့အကြှနျုပျကိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါအနည်းဆုံးတွေ့ပြီနိုင်ဘူးတဲ့သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးဘူး တစုံတခု လှတယ် သူမသည်သူမနှင့်တူသောကိစ္စမဟုတ်၊ အကြောင်းပါ မြင်ရဖို့ငါ့အနိုင်စွမ်း။ Porn ကဒီအစိတ်အပိုင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတွန်းအားပေးခဲ့ပေမယ့်ငါကဒီနေရာကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေချာပေါက်လာနေတယ်။ နေ့တိုင်းငါ့ကိုပတ်ပတ်လည်အလှတရားတွေပိုပိုပြီးတွေ့နေရတယ်၊ ငါလိမ်ပြောခြင်းကြီးကနေဝေးနေတယ်။
ဤတွင်အမှန်တရား, အလှအပနှင့်ချစ်ခြင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးဟာငါ့ဘ ၀ ရဲ့အလဟ just ဖြစ်ရုံသာ ..